दशैंमा बेथिति::Hamro Koshi Awaj / awaz
दशैंमा चोरी, ठगीका घटना र दुर्घटनाबाट बचौं
हामी नेपालीहरुको महान चाड बडादशैं ढोकामै आइसकेको छ । दशैं सँगसँगै सबैतिर उत्साह उमङ्ग छाएको छ । सहरहरु अरुबेला भन्दा केही सुनसान भइसकेका छन् । दशैं मान्नको लागि घर फिर्नेहरुको बढ्दै गएका छन् । दैनिक हजारौंको संख्याले काठमाडौंलगायत अन्य सहर छाडर गइरहेको छन् । आफ्नो विभिन्न आवश्यकताहरु परिपूर्ति गर्न बाहिरी जिल्लाका लाखौं मानिसहरु राजधानीलगायत अन्य सहरमा बस्छन् । कोही रोजगारीको लागि भित्रिएका हुन्छन् त कोही आफ्नो पठनपाठनलाई निरन्तरता दिन आएका हुन्छन् । व्यापार–व्यवसाय गर्न आफ्नो घर छाडेर सहर पस्ने पनि उत्तिकै हुन्छन् । दशैं लागेसँगै सबै आफ्नो डेरा, सटर, अफिस बन्द गरेर आफ्नो जन्मथलोतिर लाग्छन् ।
घरजाने उमङ्ग सँगसंगै उनीहरुले आफ्नो घरको सुरक्षा र्बििर्सन्छन् । चाडबाड ओइरिएसँगै लुटेरा, पाकेटमार र चोरहरुको पनि ओइरो लाग्छ । घरघरमा चोरीको घटनाहरु घट्छन्, बजारमा पाकेटमारको प्रकोप पनि त्यत्तिकै बढ्छ । हामी घर जान्छौं तर आफ्नो डेराको सुरक्षामा ध्यान दिँदैनौं । झन् चाडबाडको बेलामा दिउँसै चोर पसेको पनि थाहा हुँदैन । कतिले कोठामा ताला ठोकेर जान्छन् तर घरधनीलाई समेत जानकारी गराएका हुँदैनन् । यसरी पनि चोरहरु सजिलै घरभित्र पस्न सक्छन् । थोरै हतारले गर्दा कसैले कोठामा तालासमेत लगाउन बिर्सिन्छन् । जसको कारण चोरी हुन सक्छ र दशैं मान्न गएकाहरुको चाडबाडको अनुभव नै खल्लो हुने गर्दछ । घरधनीले पनि कोठा बस्नेहरुको सामानको सुरक्षा गर्न सहयोग गर्नुपर्छ भने प्रहरी पनि यसबेला चनाखो हुनुपर्छ । घरधनीले आफ्नो घर भाडामा लगाइसकेपछि कोठा बस्ने कहाँ गए, कहिलेसम्म फर्किन्छन् भनेर सम्पूर्ण कुराहरु सोधपुछ गर्नुपर्छ । अझ चाडबाडको बेलामा त घरधनीहरुले समेत सुरक्षाको ख्याल गर्ने दिन आइसक्यो । कोठाबहालमा लगाउने र जिम्मेवारी बहन नगर्ने घरधनीहरु यत्तिकै छन् । आफ्नो घर भाडामा लगाउने अनि त्यहाँ नबसेर अन्त्यै गएर बस्ने घरधनीहरु पनि छन् । यस्तो अवस्थामा चोरहरु दिउँसै पस्न सक्छन् । दशैंको बेला अधिकांशलाई दशा लाग्ने गर्छ ।
दशै सँगसँगै विभिन्न बेथितिहरु पनि ननिम्तिएका होइनन् । सार्वजनिक यातायातमा पनि पाकेटमारको प्रकोप बढ्दो छ । कसैलाई सुइँको नदिइ पाकेटमारहरुले कसैको मोबाइल, पर्स चोरी गर्छन् । अझ निजी सवारी रोकेर समेत पाकेट मारेको घटनाहरु बढ्छन् । आफू पनि सतर्क हुनुको विकल्प छैन । पाकेटमाराले नभेट्नेगरी पैसा बोकेर हिँड्नुपर्छ । अझै सार्वजनिक यातायात चढ्दा आफ्नो पैसा भएको ब्याग कसैलाई पनि समात्न दिनुहुँदैन । एकपटक चोरी भइसकेपछि जति रोइकराइ गरे पनि त्यो फर्केर आउने छैन । पाकेटमारलाई सबैभन्दा सजिलो भीडभाडमा हुन्छ । त्यसैले भीडभाडमा जानुभन्दा अगाडि पूर्ण तयारी गर्नुपर्दछ । पैसा कसरी सुरक्षित राख्ने, आफ्नो सामानको ख्याल कसरी गर्ने यसमा सर्वसाधारण पनि आफै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
यता, सार्वजनिक यातायातको आफूखुशी बढाइएको भाडालाई पनि बेतिथिको रुपमा हेर्न सकिन्छ । सार्वजनिक यातायातले आफूखुसी भाडादर कायम गर्नु कानुन विपरीत हो । संविधानलाई आफ्नो पैतालामुनि राखेर हिँडेका यातायात व्यवसायीलाई भने कसैले नियन्त्रणमा ल्याउन सकिरहेको छैन जस्तो लाग्छ । चाडबाडको मुखमा आएर यसरी आफूखुसी भाडा बढाउनु उचित होइन । यसरी आफूखुसी भाडा बढाउने यातायात व्यवसायीलाई सरकारले कारबाही नगरेको भन्दै सर्वसाधारणहरु निकै आक्रोशित छन् ।
कोरोना महामारीले अधिकांशलाई बेरोजगार बनाइदिएको छ । बेरोजगारी बढेसँगै महङ्गी पनि बढेको छ । जसरी पनि खानैपरेको छ । गरिब जनतालाई एक छाक पेट भर्न पनि धौ धौ परिसकेको छ । गरिब जनता भोकले मर्न लागेको सरकारले किन देख्दैन । झन चाडबाडको बेलामा महङ्गी यत्रो बढेको छ कि न्यून आयस्तर हुनेलाई त कसरी चुलो बाल्ने भन्ने चिन्ताले पिरोलिरहेको छ । हरेक साता सामानको भाउ उथलपुथल हुन्छ । यो हप्ता एक सय पचास परेको सामान अर्को हप्ता दुईसय पर्छ । ज्यालादारी गर्ने र निजी अफिसमा काम गर्नेहरुको तलब भने बढ्दैन् । अनि यस्तोमा कसरी खाने ? यसको जवाफ त सरकारले दिनुपर्ने होइन ?
बजार अनुगमन भने एक प्रतिशत पनि छैन । व्यापारीहरुले कालोबजारी समेत गरेका छन् । भनौं वर्षौदेखि कालोबजारी यथावत नै छ । म्याद सकिएको सामानहरु पनि बजारमा छ्याप्छयाप्ती छन् । तापनि अनुगमन हुन नसक्न, राज्य मौन रहनु दुःखद् हो ।
दशैंको लागि भनेर विभिन्न ठाउँमा दशैंलक्षित बजार खुलेका छन् । जहाँ अत्यासलाग्दो भीड देख्न सकिन्छ । यस्तो भीडमा सतर्क हुन निकै आवश्यक छ । सामान किन्दा कतिले हतारमा आफ्नो पर्स, झोला बिर्सिने गर्दछन् । त्यस्तै, भीडभाडमा आफै सजकता अपनाउन निकै जरुरी छ । अझ व्यागमा पैसा, कुनै महङ्गो अनि महत्वपूर्ण सामान छ भने त्यस्तो बेलामा निकै सतर्क बन्नैपर्छ । यदि सतर्क हुन सकिएन भने दशा निम्तिन्छको मानिनेछ ।
दशैंमा सिट संख्याभन्दा बढी यात्रु नहाल्न भनेतापनि कोचाकोच यात्रु हालिन्छ । कोरोनाको जोखिमलाई समेत ध्यानमा राखिएको छैन । सिटभन्दा बढी यात्रु हाल्दा सवारी दुर्घटना निम्तिन सक्छ । नेपालको सडक हेर्नलायक छैन । धेरै ठाउँ खाल्डाखुल्डी छन् । वर्षेनी करोडौं बजेट त्यही खाल्डा पुर्दै गएको आभाष हुन थालेको छ । यस्तो सडकमा सवारी दुर्घटना हुन सक्दैन भन्न सकिँदैन । यात्रु सँगसँगै सामानको चाप पनि उत्तिकै हुनाले दुर्घटनाको सम्भावना बढी हुन्छ । दशैंको मुखमा अप्रिय घटनाको नघटुन् । कसैले सवारी दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाउनु नपरोस् ।
बैंक, फाइनान्सबाट पैसा निकाल्न जाँदा पनि धेरै सजक हुनुपर्छ । चोरहरु बैंक, फाइनान्सको गेटबाहिर कुरेर बसेका हुनसक्छन् । को कहाँ जान्छ भनेर उनीहरुले विचार गरिरहेका हुन्छन् । त्यसैले पनि पैसा निकाल्न र राख्न जाँदा धेरै होसियार हुनुपर्छ । चाडबाड सबैको लागि हो ।
हालः भक्तपुर (अनुषा पत्रकारिता विषयमा अध्ययनरत् छिन् ।)